बैठक कोठा उज्यालो बनाउन ग्लास ग्लोब ल्याम्पहरूमा शर्त लगाउनुहोस् | बेजिया
मारिया vazquez | 19/11/2021 18:00 | घरका सामानहरू
को लागि धेरै विकल्पहरू छन् बैठक कोठा उज्यालो तर यी मध्ये त्यहाँ सधैं कोही छन् जो अरू भन्दा बढी बाहिर खडा छन्। गोलो आकारको गिलास बत्तीहरू सबैभन्दा उल्लेखनीय मध्ये एक हो। त्यसोभए यदि तपाईं बत्तीहरू बैठक कोठामा महत्त्वपूर्ण तत्व बन्न चाहनुहुन्छ भने, गिलास ग्लोब बत्तीहरू उत्कृष्ट शर्त हुन्।
यी बत्तीहरू कुनै पनि ठाउँमा फिट हुन्छन्, तर विशेष गरी चम्किन्छन् क्लासिक र समकालीन वातावरण। तिनीहरूले विभिन्न रूप लिन सक्छन्; झूमर जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् वा स्वतन्त्र रूपमा र ठूला गोलाहरूसँग खडा हुनुहोस्। के तपाईलाई थाहा छ तपाईको बैठक कोठामा ती मध्ये प्रत्येकलाई राख्नको लागि उत्तम ठाउँ कुन हो?
बैठक कोठाको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ग्लोब ल्याम्प छनौट गर्न सजिलो छैन। यसको लागि एक कारण छ: डिजाइन को विस्तृत विविधता। तर हामी आशा गर्दछौं कि आजका तस्बिरहरूले तपाईंलाई प्रेरणा दिन्छ र तपाईंलाई छिटो निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यदि यस लेखको अन्त्यमा तपाई के चाहानुहुन्छ भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, कम्तिमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाई चाहनुहुन्न। र त्यो, कहिलेकाहीं, लगभग पहिलो जस्तै महत्त्वपूर्ण छ, के तपाईं सहमत हुनुहुन्न?
1 कफी टेबलमा
2 भोजन क्षेत्र मा
3 सोफाको छेउमा फ्लोर बत्तीहरू
के तपाईं यो बत्तीलाई बैठक कोठाको बीचमा, कफी टेबलमा राख्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाइँ यो बत्ती सामान्य रूपमा बैठक कोठालाई उज्यालो बनाउने बत्ती बन्न चाहनुहुन्छ भने, यो एकमा शर्त लगाउनु उत्तम हुन्छ। विभिन्न हातहरु संग बत्ती जसले फुर्सद र आरामको लागि क्षेत्रलाई अँगालेको छ, कोठामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण।
यस अनुच्छेद माथिका सबै बत्तीहरू फरक हात र छन् गोलाको आकारमा गिलास बत्तीहरू र अझै पनि तिनीहरू धेरै फरक छन्। अव्यवस्थित लुक र सानो गोला भएकाहरू आधुनिक र परिष्कृत ठाउँहरू सजाउनका लागि उपयुक्त हुन्छन्, जबकि सफा वा बढी सङ्कलन गरिएको आकार र मध्यम क्षेत्रहरू भएका बत्तीहरू अधिक रूढीवादी वा आरामदायी वातावरणमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्।
भोजन क्षेत्र मा
यी गिलास ग्लोब बत्तीहरू राख्न मनपर्ने क्षेत्रहरू मध्ये एक भोजन कक्ष हो। यदि घरमा बैठक कोठा र भोजन कक्ष साझा ठाउँ छ र तपाईं पछि ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, खाने टेबलमा यस प्रकारको बत्ती राख्दा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। पहिले नै उल्लेख गरिएको कुनै पनि जस्तै बत्ती तर जसको ल्याम्पसेडहरू छतबाट टाढा छन् र टेबलको नजिक, पक्कै पनि, डिनरहरूलाई आरामसँग अन्तरक्रिया गर्नबाट रोक्न।
जसरी बैठक कोठामा हामी थप सामान्य प्रकाश खोजिरहेका थियौं, भोजन कक्षमा यो पर्याप्त छ कि प्रकाश टेबलमा पर्यो। यदि तालिका धेरै लामो छ भने, आदर्श एक लामो बत्ती राख्न वा एक मा शर्त हुनेछ धेरै समान बत्तीहरूको सेट एकल क्षेत्र को जसमा तपाईं उचाइ संग खेल्नुहुन्छ। यदि यो गोलो छ भने, हामीलाई एकल ठाडो अक्ष तर धेरै "क्यास्केडिङ" क्षेत्रहरू भएको बत्तीमा सट्टेबाजी गर्ने विचार मनपर्छ।
सोफाको छेउमा फ्लोर बत्तीहरू
अहिलेसम्म हामीले छत बत्तीहरूको बारेमा कुरा गरेका छौं, तर त्यहाँ पनि छन् काँचको गोलाहरूसँग भुइँ बत्तीहरू। र यी सोफाको छेउमा राख्नको लागि उपयुक्त छन् र आरामसँग पढ्न वा थप घनिष्ठ वातावरण सिर्जना गर्न सक्षम हुनको लागि यस ठाउँमा थप विशिष्ट प्रकाश प्रदान गर्नुहोस्।
यी प्रकारका बत्तीहरूमा सामान्यतया सुनौलो फिनिश र तीनवटा सेतो गोलाहरू सम्मको संरचना हुन्छ। विभिन्न उचाइ र दिशाहरूमा राखिएको छ। तिनीहरू बत्तीहरू होइनन् जसको प्रकाश तपाईंले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि त्यहाँ यी पनि छन् जुन तपाईंले पहिलो दुई छविहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। अन्य प्रकारको विपरीत खडा बत्तीहरू यिनीहरूलाई गोलाहरूको वजनलाई समर्थन गर्न सक्ने यस्तो संरचना चाहिन्छ, त्यसैले राम्रो मूल्यमा यति धेरै सम्भावनाहरू भएका बत्तीहरू फेला पार्न सधैं सजिलो हुँदैन।
गिलास ग्लोब बत्तीहरू, तपाईंले देख्नुभएको रूपमा, बैठक कोठा उज्यालो गर्न एक उत्कृष्ट विकल्प हो। हामी तपाईंलाई बैठक कोठामा यस प्रकारको एउटा मात्र राख्न सिफारिस गर्छौं, विशेष गरी यदि यो ठूला गोलाहरू भएको डिजाइन हो, ताकि यसलाई ओभरलोड नगर्नुहोस्। त्यो विशेष कुनामा ध्यान आकर्षित गर्न यो एक उत्कृष्ट उपकरण पनि हुनेछ।
के तपाईलाई यी बत्तीहरू मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » घरका सामानहरू » बैठक कोठा उज्यालो बनाउन ग्लास ग्लोब ल्याम्पहरूमा शर्त लगाउनुहोस्
ब्याट्री र ब्याट्री, एक वातावरणीय समस्या
कुन पहिला गरिन्छ, दाँत माझ्ने वा फ्लस गर्ने?